कसले बुन्दैछ बिजुलीका खम्बाहरूमा बाँसका... :: प्रभाकर गौतम :: Setopati
प्रभाकर गौतम काठमाडाैं, फागुन १६
बिजुलीको खम्बामा चोया बुन्दै। तस्बिर सौजन्यः कैलाश श्रेष्ठ
यसको श्रेय जान्छ 'भिजुअल आर्टिस्ट' कैलाश श्रेष्ठलाई। उनको टोलीले काठमाडौंमा चालीसभन्दा बढी खम्बा चोयाले बेरिसके।
'आफ्नै बुनाइ संस्कृति प्रदर्शन गर्दै हाम्रो सार्वजनिक स्थलको कुरुप र कृत्रिम अनुहार देखाउन खोजिएको हो,' कैलाश भन्छन्, 'यो सामाजिक सरोकारको विषयमा कला र कलाकारको हस्तक्षेप पनि हो।'
उनले स्थानीय छविबहादुरलाई अनुरोध गरे, 'यो खम्बालाई डोकोले बेर्दिनुस् त कस्तो देखिन्छ?'
'घरलाई संग्रहालय बनाउँछु भनेको भुइँचालोले घर नै संग्रहालय भइदियो,' कैलाशले भने।
भुइँचालोको मार खेपेका मुख्य ठाउँमध्ये थियो दोलखा। उनले पैसा संकलन गरेर कलामार्फत् मानसिक 'हिलिङ'को काम गरे। यसक्रममा सञ्चालित विभिन्न कार्यशाला र प्रदर्शनीले उनलाई समुदाय नजिक पुर्‍यायो।
२०७३ मा उनले 'दोलखा एल्बम' नामक रेसिडेन्सियल वर्कसप र होमस्टेबाट 'कन्टेट' जन्माए र त्यहीँ प्रदर्शन गरे। यसमा स्थानीय र काठमाडौंका कलाकार सहभागी थिए। समुदायले मनपरायो। त्यहीँको कथामा सिनेमा, त्यहीँको संस्कृतिमा संगीत बन्यो।
कैलाश भन्छन्, 'पूरै गाउँ खुला आर्ट स्पेस बन्यो। सहभागिताले कला उत्सव जस्तै भएको थियो दोलखा एल्बम।'
त्यति बेला उनलाई मान्छेले कला बुझ्दैनन् भन्ने गलत लाग्यो। बरू, कलाकारले 'कन्टेम्पोररी' कला सिर्जना गर्न नसकेको महशुस गरे।
'हाम्रो काममा चित्र मात्रै रहेछ, कला रहेनछ। त्यसैले ग्यालरीमा सीमित भएछौं।'
सडक छेउका खम्बामा डोको ओढाउने पछिल्लो कामलाई यसअघिका कामको सिलसिलामा बुझ्नुपर्ने कैलाश जोड दिन्छन्, 'ठूलो काम नहोला, तर फुत्त आको काम हैन।'
'उपभोग्य कुरालाई कसरी हाम्रै पहिचान बोकेका वस्तुले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको हुँ,' उनी भन्छन्, 'हामीले जे प्रयोग गरेका छौं, त्यो हाम्रो र राम्रो पनि छ।'
कैलाशले आफ्नो प्रदर्शनी अभियानलाई 'आइ एम यु' (म तिमी हुँ)नाम दिएका छन्। मान्छे-मान्छे र मान्छे-सार्वजनिक स्थल कसरी अन्तर्सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा 'आइ एम यु'ले समेटेको उनको भनाइ छ।
अन्तक्रियात्मक कलाले संवाद र सौहार्द वातावरण सिर्जना गर्छ। कैलाश भन्छन्, 'हाम्रो काममा प्रयोग भएका चिज र संलग्न कलाकारले काठमाडौंको भिडमा 'आइ एम यु' भनिरहेका छन्।'
'उनीहरूको कुरा सुनियो-बुझियो?'
कैलाशको जवाफ छ, 'सुरूमा मान्छे पनि को हो, को हो भनेजस्तै कला पनि के हो, के हो जस्तो लाग्न सक्छ। कलामार्फत् संवाद गर्न समय लाग्छ।'
पहिला त्यही बाटो हिँड्ने बटुवा खाँबाबारे बेखबर थिए। चोयाले बेरेको देखेपछि भने अडिएर हेर्ने उदाहरण दिँदै उनी थप्छन्, 'सार्वजनिक स्थलमा हाम्रो आफ्नै वस्तु हुँदा नयाँ सम्बन्ध बन्ने रहेछ।'
कैलाश दोलखाका कलाकारसँग मिलेर जमलको एउटा खाँबोमा चोया बेरिरहेका थिए। २० वर्षजतिका युवक पुल चढेर बाटो काट्न लागेका थिए। फनक्क फर्किए र कैलाशनजिकै आएर भने, 'दाइ, म पनि बुन्छु है।'
परिचितहरू छेलिने काठमाडौंको भिडमा अपरिचित बीचको यस्तो 'मानव सम्बन्ध'लाई कैलाश दुर्लभ मान्छन्।
भन्छन्, 'संवाद र अन्तक्रियाबाहेक कलाको काम प्रश्न र हस्तक्षेप गर्नु हो। कलाले दिमागमा प्रभाव पार्नुपर्छ, नत्र कलामाथि प्रश्न उठ्छ।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १६, २०७६, १४:२४:००